Qabiil, Qoys iyo Qofba uu noqon karaa Qaran e' Awdal Dawlad Goboleed ay yeelato ayaa Danteeda u hagar bixi karta Daliiladan dartood!! Dr.Khadar-Libaaxley.
Qabiil, Qoys iyo Qofba uu noqon karaa Qaran e’ Awdal Dawlad Goboleed ay yeelato ayaa Danteeda u hagar bixi karta Daliiladan dartood!! Dr.Khadar-Libaaxley.
Sida Sooyaalka muga tagtada taariikhdu tibaaxayso waxa ay muraayada la isku daawado u tahay gadaal Aadamaha beerma sida ay u miisaamayaan siyaasadaha maareynta iyo jaan-goynta noloshooda khuseeya; halkan waxa aan idin kula wadaagayaa sida Qabiil, Qoys iyo Qofba Qaran u noqon karo e’ wacyigiina fura.
Marka aynu si fiican u bogono taariikhada ku duugan dawladihii soo maray dunida muslimka iyo kuwa aan muslim ba aheyn waxa aynu si fahmo fiican leh u ansixin doonaa xaqiiqada xogteena kor ku xusan isla markaana weynu isku garaabi doonaa insha’allaah.
1. Dawla Amawiya :iyada oo huwan magac ( Qabiil, Qabiilk Banii Ummaya la yidhaahdo ); wax yar uun kadib 4 tii khaliif ee Nabi Maxamed Naxariis iyo Nabad Galyo Korkiisa Ha ahaato e’ ; waxa ay aheyd dawlad boqortooyo oo curadnimo ku dhisan , 100 sanno Waxa ay aheyd Dawlada islaamka ee fidisay Diinta iyo tallada islaamka 3da qaaradood ee dariska ah Asia , Africa, iyo Europe.
2. Dawla Cabaasiya : waxa ay tallada hayeen in ka badan 508 sanno iyaga oo huwiyey magac ( Qoys, Qayska C/laahi Binu Cabaas Binu Cabdil Mudalib ee ahaa Qoyskii Nabi Maxamed adeerkii ); wax yar uun kadib 4 tii khaliif ee Nabi Maxamed Naxariis iyo Nabad Galyo Korkiisa Ha ahaato e’ ; waxa ay aheyd dawlad boqortooyo oo curadnimo ku dhisan, Waxa ay aheyd Dawlada islaamka ee fidisay Diinta iyo tallada islaamka 3da qaaradood ee dariska ah Asia , Africa, iyo Europe.
3. Dawla Fadimiya: 200 sanno ayey haysay tallada islaamka waqooyiga iyo bariga afrika, waa boqortooyo haysatay mad-habta ismaciiliyada oo shiica ah waa ( qoys, qoyskaasi oo ku abtirsada Cali binu Abii Tallib iyo Fadumo Rasuul ) 50 sano ee dabayaaqada boqortooyadaasi waxa ay bariga afrika gaar ahaan Ethiopia ka assaastay boqortaayadii Cumar Walishamsi, oo ku abtirsada faadimiyiinta shiicada ah Cumar iyo wiil kiisii Cali waa ninka maanta qoomiyada Gadabuursi ku abtirsadaan ayaa yagleelay boqotooyadii IFAT gadaalna ADAL .
4. Dawla Cusmaaniya : waxay aheyd Boqotooyo huwan ( magac qofeed ) taasi oo uu Aasaasay hogaamiye Diimeed siyaasiya oo asal ahaana turki ka ab-qaba, waxa uu huwiyey Dawladii islaamka ugu weyneyd magaciisa Osman Gazi, kaasi oo dhashay ( 1258—died 1324 or 1326) markii dambe waxa ka dhaxley wiilkii curadkiisa ahaa 8 diisii wiil, sidaasna ay ku noqotay boqortooyo curadeed, marba ninka curadka ah wiilkiisa curadka ah dhaxalka la wareego 600 oo sanno ayey sidaa ku haysay tallada islaamka boqortooyadaasi sidatay magaca hogaamiyahii cusman.
5. Dawlada Israel :Waa Dawlada huwan magac Nabi , dhul ahaan ka yar Gobolka Awdal, awood ahaan safka hore kaga jirta quwadaha bariga dhexe ku hirdamaya, oo macnaheedu yahay sidii ay ansixiyeen baarlamanka Israel 2018 , in ay tahay dawlad u gaar ah tafiirta 12 kii wiil ee uu dhaley Nabi Yacquub caleyhi salaam; Si waxa ay u noqoneysaa magac Qoomiyadeed oo ka kooban 12kaa qabiil ee illama yacquub , waxay u dagaalamaan, dhiig u daadiyaan illaa maanta , doodaan, dhisaan waa taas.
6. Boqortoyada Sucuudiga : waa dawlada ugu bad iyo baaxad weyn dawladaha khaliijka carabta waxa ay huwantahay magac qoys reer Aalla Sucuud oo illaa maanta tallada dalkaasi hayey 80 sanno.
7. Dawlado iyo Maamulosita hayb qabiil iyo Qoomiyadeed ayaa ka yagleelan geeska afrika iyo dawladaha dariskeena gaar ahaan Ethiopia oo ay ka mid yihiin ( Dawlad deegaanka Somalida, Oromia, Tigre , Afar, Ahmara) ma’aha wax la ceebsado ama lala yaabo balse waa mid qiime ku yeelatahay ka dhaadhicinta dhagta maqashay kadibna aqbashey ee tixgalisay.
Guntii iyo Gabogabadii:
Awdal waxa ay baahi weyn u qabtaa Dawlad Goboleed Qaran ah , si ay u timaado Somaliland loo dhanyahay , Dawladaasi oo u kacda kashaqeynta Danaha iyo Horumarka Dadka Awdal ku abtirsada, Xafida oo Daryeesha Muwaadiniinteeda, isla markaana talladooda 70% Awdal dhexdeeda looga arimiyo .
Tani waxa waa habka kaliya ee lagu heli karo Somaliland loo dhanyahay, si loo hello Somaliland loo dhanyahayna waxa ay u baahantahay in dastuurka la furo oo lagu sameeyo kaabis iyo wax-kabadal dhamesytiran oo dan guur u ah dhamaan ummad weynaha reer Somaliland.
Fiiro gaar ah: qormadani ma’aha mid xambaarsan fikir mucaaridnimo iyo qaran dumis ah balse waa aragti tilmaameysa isbedel baahi loo qabo.